Fironana mivantana sy statistika mivantana. Martech Zone
Fironana mivantana sy statistika mivantana
Talata, Aogositra 1, 2017 Douglas Karr
Iray amin'ireo tetikasanay amin'ity taona ity ny fananganana a velona-mivantana latabatra ao amin'ny studio podcast. Afaka mampiasa fitaovana fampitaovana mitovy amin'izany izahay raha manampy video. Midina ny vidin'ny fitaovana video ary fonosana marobe no manomboka mipoitra amin'ny orinasan-tsary mivantana ho an'ny fitantanana studio kely. Manantena izahay fa hahazo fakan-tsary farafahakeliny 3 sy rafitra iray hitantanana ny ampahatelony sy fampidirana horonan-tsary avy amin'ny birao finday na rindrambaiko fihaonambe.
Ny fandraisana an-tanana aloha dia mety hampidi-doza ny vidiny lafo sy fitaovana efa nilaozan'ny toetr'andro fa ny tombony azo amin'ny fandraisana an-tsena. Manantena aho fa tsy hiandry ela isika, fa lava kosa hanararaotana ny haitao mahatalanjona izay novolavolaina. Raha te hanaraka olona amin'ny Internet ianao, manam-pahaizana momba ny teknolojia mivantana, alao antoka fa hanaraka izany Joel Comm. Mizara ny farany sy ny lehibe indrindra amin'ny sehatra sy fitaovana izy.
Ka aiza no misy antsika amin'ny streaming mivantana ankehitriny? Mipoapoaka ny fitomboany ary mety ho lavitra eo amin'ilay lalan'ny fananganan-jaza noho ny noeritreretin'ny maro. Misy mpilalao dimy mivantana mivantana mivantana eo an-kianja raha ny amin'ny fampiroboroboana ity sary ity, samy manana ny tombony ananany:
Facebook Live - Mpampiasa maherin'ny 360 tapitrisa no mijery Facebook Live tsy tapaka… fa tadidio fa ny Facebook dia manosika ny horonantsary mivantana, mamoaka fomba fijery iray taonina fa manontany tena aho ny sasany amin'ireo antontan'isa momba ny fifamofoana. Ny horonan-tsary mivantana dia zahana intelo kokoa noho ny atiny video hafa ary mamela mivantana ny fanehoan-kevitra sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny fahafaha mamerina ilay horonantsary avy eo. Facebook koa dia mamolavola mpampiasa azy Sarintany mivantana Facebook amin'izay ianao dia afaka mahita renirano mivantana sy eo an-toerana. Ny Facebook Live dia azo atao amin'ny alàlan'ny finday, birao ary amin'ny pejy ankehitriny.
Tantara mivantana momba ny Instagram - Manodidina ny 200 tapitrisa ny mpampiasa mahazatra mijery Instagram velona. Ny mpijery dia afaka mandray anjara amin'ny alàlan'ny tiany sy ny fanehoan-kevitra amin'ny tena izy. Afaka misafidy ny hanao tsindry hevitra amin'ny fanehoana ny mpijery rehetra ny mpanolotra. Ny tantara mivantana dia misy amin'ny alàlan'ny ampahany lehibe amin'ny fampiharana ary misy tantara vaovao azo jerena amin'ny Top Live fizarana eo amin'ny fizahana zahana. Instagram dia naka ampahany kely tao amin'ny Snapchat, mampihena ny fitomboany 82% taorian'ny fakana tahaka ny fisehon'ireo mivantana mivantana an'i Snapchat.
Youtube Live - Raha olona maherin'ny iray tapitrisa no mampiasa Youtube, tsy mino aho Youtube Live dia hita ho a ara-tsosialy toeran-streaming mivantana amin'izao fotoana izao. Ny streaming mivantana dia ho an'ny fantsom-pahamarinana voamarina ihany ary ny onjam-peo mivantana finday tsy misy dia tsy misy raha tsy rehefa manana mpamandrika 1,000 ianao. Misy ny fanehoan-kevitra tena izy ary ny Super Chat dia manome ny mpijery fomba hanasongadinana ny hevitr'izy ireo mandritra ny fandefasana azy ireo. Hetsika mivantana amin'ny Youtube manohana fakan-tsary marobe ary azo alamina hamidy manodidina.
Twitch - Twitch manjaka eo amin'ny tsenan'ny lalao izay andaniany mpampiasa 9.7 tapitrisa isan'andro mandany 106 minitra mijery stream mivantana isan'andro amin'ny salan'isa. Ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsiketsehana amin'ny fotoana tena izy dia hita eo amin'ny varavarankely firesaka Ireo mpampiasa twitch dia afaka manentana amin'ny fampiroboroboana ny renirano hafa raha tsy mivoaka ivelan'ny seranana ny fantsonao amin'ny alàlan'ny Host Mode. Bit Emoticons dia azo vidiana ka ny mpankafy dia afaka manome fanomezana fanampiny ho an'ny streamers.
miaina.ly - Mpampiasa 6 tapitrisa no mijery ny atiny isam-bolana miaina.ly., fampiharana finday avy amin'ny musical.ly. Ny mpisera antonony dia mandany fotoam-pivoriana telo isan'andro ao amin'ny fampiharana, na 3.5 minitra isan'andro. Ahitana fanehoan-kevitra amin'ny fotoana tena izy sy ny "fitiavana emoji" ny endri-javatra. Safidy fandraisam-bahiny iray no ahafahan'ny streamer mivantana mampiditra ireo mpankafy ho vahiny amin'ny fandaharana. Ny fanomezana virtoaly novidian'ny mpankafy dia afaka miraikitra amin'ny fanehoan-kevitra ary mijanona ela kokoa eo amin'ny efijery.
Zahao ny sary rehetra avy any Koeppel Direct, Ny fiakaran'ny streaming mivantana: ny famaritana indray ny firosoana amin'ny fotoana tena izy.
Tags: facebook mivantanamivantana ny instagramlive streamingfifandonana mivantana mivantanastatistika mivantana mivantanamiaina.lymavitrikamozika.lytwitchmivantana ny youtube
Dingana 10 hananganana programa fanentanana ho an'ny mpiasa mahomby
InsideView Solika Fahombiazana mandeha amin'ny tsena miaraka amin'ny faharanitan-tsaina